ပါရမီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပါရမီ
Posted by ၀င့်ပြုံးမြင့် on Jun 4, 2015 in Creative Writing, Think Different | 22 comments
.ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ပါရမီပါမှ ဖြစ်တယ်။
.ဒီစကား ကြားခဲ့ဖူးတာ ကြာလှပါပြီ။
.ကလေးတစ်ယောက်ကို ပုံမှန်အတိုင်း အတန်းပညာ မှန်မှန်သင်ပေးသွားရင် သူ့အတန်းအလိုက် သီဝရီတွေ၊ လောတွေ၊ ဥပမာ F=ma ကစလို့ အာကာသထဲမှာ ဘလက်ဟိုးကြီးတွေ ရှိတဲ့အကြောင်းထိ သူလက်သင့်ခံသွားမှာပဲ။ ဘာလို့ဆို အမှန်တရားတွေ ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်။
.ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးကို ဖန်ဆင်းထားတာ ဘုရားသခင်လို့ သင်ကြားတော့မယ်ဆိုရင် ဒါက အမှန်တရားမဟုတ်တော့ ဘာမှ မသိနားမလည်တဲ့အရွယ်ကစပြီး ဘရိန်းဝပ်လုပ်ရတယ်။ ဘုရားကို ကြည်ညို သဒ္ဓါစိတ်ဝင်အောင် ငယ်ကတည်းက ဘာသာသွေးကို မွေးမြူ ရတယ်။
.အစ္စလာမ်မှာ ဆိုရင်လည်း အလာဟ်ကို ယုံဖို့ ကလေးတွေကို ငယ်ကတည်းက ကိုရန်ကျမ်း သင်ပေးရတယ်။
.ကမ္ဘာကြီး ဒီလောက် ဒုက္ခရောက်နေတာတောင် ဘယ်ဘုရားမှ ဆင်းမလာပါဘူးဆိုမှ အဲဒါ ဘုရားမရှိလို့ပေါ့။ အဲဒီလို မဟုတ်တာကို သင်ရတာမို့ ငယ်ကတည်းက ဘရိန်းဝပ်လုပ်ရတယ်။
.တကယ်လို့ ဘုရား ရှိခဲ့ရင်တောင် လူတွေကို တစ်ခါမှ ကိုယ်ယောင်မပြဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘ၀ပေါင်းများစွာကို စတေးပြီး လှည့်စားနိုင်လွန်းလို့ အဲဒီ ဘုရား အပြစ်ရှိတယ်။
.ဗုဒ္ဓဘာသာကျတော့ တစ်မျိုး။ သူက နဂိုကတည်းက ဘုရား မရှိဝါဒ။ သူ့ရဲ့ တရားအဆီအနှစ်က အရှိတရား အမှန်တရားဖြစ်နေတယ်။ (အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ) ။ ဒီတော့ အရှိတရား အမှန်တရားလို့ သိပ်သေချာရင် ကလေးတွေကို ငယ်ကတည်းက ဘရိန်းဝပ်လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ သစ္စာတရား အမှန်တရားတွေ မို့လို့ အချိန်တန်ရင် သူတို့ လက်သင့်ခံသွားမှာပဲ။
. F=ma တို့ ဘလက်ဟိုး တို့ကိုတောင် လက်သင့်ခံနိုင်ရင် ဒီလောက်ရှင်းလင်းတဲ့ သစ္စာတရားကို လက်သင့်ခံသွားမှာပဲ။
.ပြီးတော့လည်း ပါရမီ ပါမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ် လို့ ဆိုထားမှတော့ စကားနဲ့ညီအောင် ဘာမှ အတင်းကြီး လုပ်ယူစရာ မလိုပါဘူး။ ပါရမီ ပါရင် သူ့ဟာသူ ဖြစ်လာမှာပဲ။
အာဟိ … ကြိုက်သဗျ…
လုပ်ယူရတာ ၊ အတင်းစိတ်သွင်းပြီး မွေးရတာမျိုးဆို လက်သင့်ခံမရ…
Middle-East မှာနေခဲ့တုန်းက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Iraqui ပြောတာ သနားမိတယ်…
“ငါတို့ဘဝက မွေးထဲက ပြဋ္ဌာန်းပြီးသား ၊ ပြင်ဆင်ခွင့်မရှိဘူး” တဲ့…
ပြီးခဲ့တဲ့လကတင်.. အကြီးဆုံးခရစ်ယန်တိုင်းပြည်..ယူအက်စ်မှာ.. နှစ်စဉ်.. အေးသီးတွေလွှတ်တိုးလာနေတဲ့အကြောင်း.. စစ်တမ်းကပြတယ်..။
ပါရမီဆိုတာ.. မတော်တဆ. တိတိကျကျပြဌာန်းဖြစ်မှု..
ခေးယော့စ် တမျိုးပါပဲ.. လို့..။
“မြန်မာပြည်လပွတ္တာမှာ..အပြာရောင်လိပ်ပြာတကောင်တောင်ပံခတ်လိုက်ရင်.. ယူအက်စ်ဟားဗတ်မှာ.. လူမဲကွမ်တမ်သိပ္ပံပညာရှင်တယောက်တိုးဖို့ဖြစ်လာတယ်..။”
Stephen Hawking makes it clear: There is no God – CNET
Sep 26, 2014 – The physicist explains that science now offers more convincing explanations for existence. He is therefore an atheist.
Pew Research Center’s Religion and Public Life Project-May 11, 2015
The Christian share of the U.S. population is declining, while the number … who are religiously unaffiliated – describing themselves as atheist, …
အာ့ကြောင့် ထွီဒင်းရှင်းနယ် ဗုဒ္ဒ ဘာသာဝင်ထက်
လေ့လာပြီး ယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေက အတွေးအမြင် ပိုမှန်တယ် ပြောကြတာပေါ့
ဗုဒ္ဓက လမ်းကို ပြ ခဲ့ တဲ့ သူပါ
ဟုတ်တယ် တီရေ။ ပြောရရင်လေ အချို့ တွေနားလည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပါရမီပါမှဆိုတာ သိပ်မှန်တာပဲ။
ဗုဒ္ဒ ဘာသာ ကို ဘုရား ဝါဒ ဆိုတာထက်
သဘာဝ ဝါဒ လို့ သတ်မှတ်မယ်။
ကယ်တင်ရှင်တွေ မိစ္ဆာ တွေ မရှိဘူး
ကိုယ် လုပ်တာ ကိုယ် ပြန်ခံစားရမယ်
ကိုယ် ကြိုးစားတာ ကိုယ်ရမယ်
ဒါလုပ်ရင် ဒါဖြစ်မယ် လို့ ရိုးရိုးလေး ဟော ခဲ့ တာကို
(ဒါကိုတောင် ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ် လေ့လာ ဆန်းစစ်ပြီးမှ ယုံပါ လို့ ပြောခဲ့သေး။
ငါပြောတာ လိုက်လုပ်ကြဟေ့ ဆိုပြီး မရှိဘူး။
ငါ ဘုရား ကယ်မ မယ် ဆိုတာလဲ မရှိဘူး။)
ခုမှ ဘယ့်လို ဘယ့်လို ဘုရား မှာ ဆုတောင်းရတာတွေ ဘိုးတော်နား ကပ်ရတာတွေ
နာမည်ကြီး ဘုရား၊ စေတီ၊ ဘုန်းကြီး၊ သီလရှင်၊ ဘိုးတော်၊ မယ်တော် တွေ နား လူ တိုးမပေါက်တာတွေ
လက်တွေ့ ကျင့်ကြံ အားထုတ်ပြီးမှ…
ငါပြောတာ အမှန်တရားဆိုတာကို လက်တွေ့ကျကျ သိမှ ယုံ..တဲ့..
အဲဒါလေးကြောင့် ကျနော်… ဗုဒ္ဓ ဘာသာထဲ.. ဝင်လာဖြစ်တာလို့ ပြောရမလောက်ပါပဲ…
ကျနော့်မိဘတွေက..မိရိုးဖလာ …ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဆိုပေမဲ့…
ကျနော်က အသက် ၁၈ လောက်ထိက… ဘာ ဘာသာမှ မကိုးကွယ်ခဲ့…
ငါ့ကို ယုံကြည်ကြ….လို့… ပြောတဲ့.. ဘုရားတွေရဲ့ သူတို့ကို အားကိုးခိုင်းတဲ့ အမိန့်သံတွေကြားမှာ…
မင်းတို့ကိုယ် မင်းတို့… အားကိုးးးးး ကွ….လို့…ပြောပြီး..
ကျနော်တို့ အစွမ်းအစကို ကျနော်တို့လက်ထဲ ပြန်ထည့်ပေးတဲ့…ဗုဒ္ဓ…
သူဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ ချိုင်းထောက်မဟုတ်ဘူး..
လမ်းမှားနဲ့ လမ်းမှန်ကို… ဒါက A… ဒါက B ဆိုပြီး..ချပြခဲ့သူ…
အမှောင်နဲ့ အလင်းကို တလွှာချင်း ဆွဲခွါ လှပ် ပြခဲ့သူ…
သူ့ ရုပ်ခန္ဓာထက်… သူပြတဲ့ အမှန်လမ်းကိုသာ ကိုယ့်ခြေကိုယ့်လက်နဲ့ လျှောက်စေချင်ခဲ့သူ…
လွတ်လပ်စွာ…ရွေးချယ်ခွင့်နဲ့… ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုရဲ့ ရလဒ်ကို ကိုယ်တိုင် စံစား / ခံစားစေတတ်သူ…
အဲ့ဒါလေးတွေ … သိပြီး… သူ့ လမ်းစဉ်တွေကို စိတ်ဝင်စားရာကနေ…
ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် အဖြစ် ခံယူလိုက်မိတော့တာပဲ…
ကျနော်က … အသက် ၁၈ လောက်မှ… ပါရမီ ရောက်တာ…
၁၈ နှစ် မတိုင်မီက.. ကမ္ဘာအေးနားမှာ…
တကယ်လို့များ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ မိဘ ဝမ်းထဲ ဝင်မိရင်
တကယ်လို့များ အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ မိဘ ဝမ်းထဲ ဝင်မိရင်
တို့တွေ ဒီလို ဘယ်တွေးဖို့ မရှိ သလောက်နဲ မယ် ထင်ရဲ့။ နော။
တစ်ချို့ (တကယ်တော့) အများစုက ဘာသာရေးလုပ်တာ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ် ကို ကုစားနိုင်ဖို့ ဆေးလို သဘောထားနေကြတာ ထင်ပါတယ်။
သိပ္ပံနည်းကျ ဆေးကုနည်း တွေထဲ မှာတောင် ဆေးတုတွေ သုံးပြီး နေကြတာကို placebo effect လို့ခေါ်ကြသေး။
ဒါပေမဲ့ ရမ်းကု လိုမျိုး ကျ ရောဂါပိုဆိုးသွားတာပေါ့။
ဘာသာရေးလဲ ထိုနည်း၎င်း သုံးတတ်တင်ဆေး၊ မသုံးတတ်ရင်ဘေးပေါ့။
ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ မိဘ ဝမ်းထဲ ဝင်…
တချို့က… အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ မိဘ ဝမ်းထဲ ဝင်..
တချို့ကတော့… မွေးကထဲက.. မျက်မမြင်.
တချို့ကတော့.. မွေးကထဲက… အိုးဘားမားမိန်းမဗိုက်ထဲကထွက်…
အဲဒါနဲ့ပါတ်သက်ပြီး… ဗုဒ္ဓ၀ါဒနဲ့အမြင်ကို ဆွေးနွေးကြည့်ချင်သား..။
( ဘုရားဟောပါတယ်ဆိုတဲ့.. ဟိုသုတ္တံ..ဒီသုတ္တံနဲ့တော့ ကိုင်မပေါက်စေလို..။ အ၀ါတွေပြောတာမို့.. မယုံတဲ့ဖက်.. ၆၀%ထားပါကြောင်း..)
ဟိုဝင် ဒီထွက်ကတော့မဆွေးနွေးတတ်ဘူး။
ဒါပေမယ့်အရင်ဘဝ အကြောင်း ပြန်ပြောနိုင်တဲ့လူဝင်စား
အတော်များများတွေံဖူးတယ်။ အနီးကပ်ဆုံးက အဘိုး( အမေ့ 
ရဲ့အဖေ )။ ခု လက်ရှိဘဝမှာတော့သူက ကျနော့ ရဲ့ တူဝမ်းကွဲ။
ခုတော့လူပျိုဖြစ်နေပြီ။ သူ ငယ်ငယ် ကလေးဘဝမှာ ကျနော့အမေ့ အကြောင်းနဲ့သူ့ ရဲ့အရင်ဘဝက သူ့ နေခဲ့ တဲ့သူ့ခြံဝန်းအကြောင်း
( လက်ရှိ ကျနော်တို့ နေ ) အမြဲပြောတတ်တယ်။ အမေက သူ့ ရဲ့တစ်ဦးတည်းသော သမီး။ သူကွယ်လွန်ချိန်မှာ အမေက အဝေးမှာ။ နောက်ပိုင်း လူပျိုပေါက်ဖြစ်ချိန်ကစပြီး အရင်ဘဝအကြောင်း မပြောတော့ ဘူး။ ကျနော့ အမ ဝမ်းကွဲတွေက သူ့ ကို သူတို့ ထက်အသက်အများကြီး ငယ်ပေမယ့်အဖိုးလို့လေးလေးစားစားခေါ်ကြတယ်။
သူကြီး ကွကိုယ်သာ ဖတ်ကြည့်ပေရော့။
4. Here we will discuss yet another recent finding in science that makes the process of rebirth more easily “explainable”. Please note that I am not trying to verify Buddha Dhamma by science. It is the other way around; I am saying that science is far behind Buddha Dhamma, and is now trying to catch up just the material aspects of how this world works; science has not made any significant progress on how the mind works.
In the essay, “Evidence for Rebirth“, we saw thataperson who dies in one geographical location is reborn in another. Even though the consciousness is NOT transmigrated as is believed in some other religions, some form of energy must be leaving one place is instantly appearing at another.
What about the speed of light barrier for anything or any information to travel, based on Einstein’s special theory of relativity? It turns out that again we are inaunique time in history, where the Buddha’s teachings are beginning to be, even if not absolutely confirmed, at least elevated to the level of possibility by Western science. For millennia, numerous people had strong enough faith to believe Buddha’s words and to commit their entire lives to pursue Nibbana. (Actually it is not blind faith, since if one studied the Dhamma/ Abhidhamma carefully, one could be convinced that it must be true).
6. Since then that same experiment has been repeated with electrons and ions as well. This effect is called the “quantum entanglement”, and leads directly to other related concepts such as “holographic universe” and “interconnectedness”. The conclusion seems to be that entangled particles can be interconnected even if they are situated across the universe! By the way, we need to remember that our universe began its life with the “Big Bang” when everything in the universe sprang out of an unimaginably dense “point”; thus inaway we are all connected to each other and also to “everything” in this universe atavery fundamental level.
ဗုဒ္ဓက.. သံသရာရဲ့အစကို.. ဆွေးနွေးဟောကြားခြင်းမပြုခဲ့ဖူးဗျ..။
အဲဒီအပေါ်ကလူကတော့.. Big Bang ကစတယ်ဆိုတာပဲ..။
By the way, we need to remember that our universe began its life with the “Big Bang” when everything in the universe sprang out of an unimaginably dense “point”; thus inaway we are all connected to each other and also to “everything” in this universe atavery fundamental level.
နှစ် ၂၆၀၀ ကျော်ခဲ့ပြီမို့.. ပိုသိလာတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်..။
.. ကွန်ပြူတာ..ဆာဗာတွေဟာ.. ဒေတျာတွကို.. (ပရိုဂရမ်လေးရေးထားရင်..)အလိုလိုပို့လွှတ်ရွေ့ပြောင်းနိုင်တာပဲ..။
လူလည်း..သူ သေခါနီး.. သူ့မှတ်ဥာဏ်တချို့က.. လွှင့်ထုတ်လိုက်ရင်.. ကာလံဒေသံကိုက်ညီတဲ့ လက်ခံရုပ်..နာမ်တခုခုဆီ..ရောက်ရှိ် ရွေ့ပြောင်းနိုင်ပြီး… ဟိုမှာဖက်က.. တစိတ်တဒေသရပြီး.. အယောင်ယောင်နဲ့.. အဲဒီမီမိုရီကို.. ပြန်ပြောနိုင်လိမ့်မယ်…. လို့.. ထင်..။
.ခက်နေတာက မဘသ ….ဒီလောက်အဝေဖန်ခံနိုင်ပါတယ်လို့…ဆိုတဲ့ဘာသာ
ဘာသာ သာသနာ အကြည်ညို ပျက်စေမှု ပုဒ်မနဲ့ အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၂နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ NLD ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း စာရေးဆရာ ဦးထင်လင်းဦး ကို အကန့်အသတ်မရှိ ချက်ချင်း ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး မဟာမင်းကြီးရုံးက တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာ အာဏာပိုင်တွေဟာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်အောင် သွေးထိုး လှုံ့ဆော်နေသူတွေ၊ အမုန်းတရား ဟောပြောနေသူတွေကို အပြစ်ပေး အရေးယူတာမျိုး မရှိပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အကြောင်းပြပြီး ဘာသာရေးကို လက်နက်တခုအဖြစ် သုံးနေတဲ့ အစွန်းရောက်တွေအပေါ် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ကန့်ကွက် ပြောခဲ့သူ ဦးထင်လင်းဦးလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတော့ ထောင်ဒဏ် အပြစ်ပေးခဲ့တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး မဟာမင်းကြီးရုံး ပြောခွင့်ရ အမျိုးသမီးက ဂျီနီဗာမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောသွားပါတယ်။
ခွဲခြား ဖိနှိပ်မှုတွေ၊ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တဲ့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အမုန်းတရားဟောပြာမှုတွေ၊ သွေးထိုး လှုံ့ဆော်မှုတွေကို မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ဥပဒေကြောင်း အရ တားဆီး ပိတ်ပင်သင့်တယ်လို့လည်း ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး မဟာမင်းကြီးရုံးက ပြောပါတယ်။
စာရေးဆရာ ဦးထင်လင်းဦးဟာ ၂၀၁၄ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်နေ့က ချောင်းဦးမြို့နယ် သုံးပန်လှ ရွာက စာပေ ဟောပြောပွဲမှာ ရဟန်း သံဃာတချို့ရဲ့ ဟောပြောချက်တွေကို ထောက်ပြ ဝေဖန်ခဲ့လို့ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့က ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အခုလို ထောင်ဒဏ် အပြစ်ပေးခံ ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ ကို မမှတ်တော့တာ။
နေတာထိုင်တာ၊ ပြောတာဟောတာ တွေကြည့်ပြီး အလကားနေရင်း သင်္ကန်း ဝတ်တယ်ပဲမှတ်တယ်။
သူတို့ ပြောသလို အရေးယူကြေးဆို ဟို ဂတုံး နဲ့ ဟို နေမျိုးဝေ ဆိုတဲ့ အကောင် ထောင်ထဲ အရင် ရောက်မှာပေါ့။
.အမိန့်ချမဲ့နေ့ အဲ့သင်္ဃန်းဝတ်တွေတပြုံ တမကြီးတရားရုံးသွားကြပြီး
.သူတပါးဒုက္ခရောက်တာကို တရားရုံးရှေ့မှာ အောင်ပွဲခံအမှတ်တရဓါတ်ပုံရိုက်ကြသေးသတဲ့…
.ဒီပို့စ်လေးက ဆရာထင်လင်းဦးကို ဂုဏ်ပြု အမှတ်တရ အနေနဲ့ ရေးတာပါ။
.ဆရာထင်လင်းဦးကိစ္စမှာ ပိုးစိုးပက်စက်ပြောချင်ပေမယ့် ဘရိတ်အုပ်ထားရတယ်။ အဲဒါနဲ့ ချော်တောငေါ့ပြီး ဒီလောက်ပဲ ထွက်လာတာပါ။
.၀င်ရောက်ကွန်မင့်ပေးသူ အပေါင်းကို ကျေးဇူးအထူးပါရှင့်။
မျှစ်ကြော်ပြုံးရဲ့ ပါရမီကလည်း ပြောချင်တာကို လိုတိုရှင်းရေးပြနိုင်ပါပေတယ်။
ဗုဒ္ဓ ဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူ တွေက
ကိုယ့်ဘာသာဟာ အစွန်းရောက် ဘာသာ မဟုတ်ပါဘဲ
ဘာလို့များ တဖက်သတ်တွေ ဖြစ်နေကြမှန်းမသိ
ဘုန်းကြီးဆို တိုင်း ရိုသေစရာ ဖြစ်အောင်နေမှ
သင်္ဃန်း ဝတ်တိုင်း ရိုသေစရာ မဟုတ်ပါဘူး
တချို့ ဆို မကောင်းကျောင်းပို့ ဆိုတဲ့အတိုင်း
လူဆိုး လူမိုက်တွေ ကို လိမ္မာ မလားဆိုပြီး
တချို့လဲ ဝိနည်း နဲ့ အညီ နေ နိုင်ပြီး လိမ္မာ သွားကြတယ်
တချို့ကတော့ သင်္ဃန်းကြီး ရုံပြီး အရက်သေစာ သောက်စား
ကြတယ် ဒီလို လူမျိုးက ရိုသေရမလား
ဦးထင်လင်းဦးကတော့ မှန်တာပြောလို့ ရွာပြင် ထုတ်ခံရတာ
အနော်လည်း အဲဒီစံဆံ ပို့စ်ရေးမလို့ဗျ…. ရေမဲ ရေမဲနဲ့ မရေးဖျစ်တာ
ဆရာတော်ရဲ့ ဆုံးမစကါးပါ။ နာယူစရာ မှတ်သားထားမိလို့ပါ။